Imisebenzi & Exhibition - jl Khiphela Co., Ltd
Usuku: Juni, 2018
Tea Saponins eziphilayo zinambuzane (uE, 5% ezisebenzayo)
Sidale futhi athuthukisiwe Tea Saponins eziphilayo zinambuzane (EW), okuyinto ekwakhiweni itiye saponin based zonke izithako zemvelo. Kuyinto spectrum ezibanzi futhi imvelo enobungane, Kancane Cha, kahle High. Manje esiyikho esigabeni zokukhiqiza umshayeli Tea Saponins eziphilayo zinambuzane.
Abstract: Kuyinto emulsion emanzini nge Tea saponins njengoba isakhi esiyinhloko ngemva High-tech ukucutshungulwa, it has izici engeke Toxic, Alikho iphunga, Ayikho ukungcola, imvelo ezinobungane, itiye saponin amanzi emulsion has effeciency okuhle ukubulala izinambuzane of Homoptera, Monochida , dipterous, ezifana Trialeurodes vaporariorum (Westwood), aphid, irayisi planthopper njll nezinambuzane Lepidoptera, ezifana Izibungu, Ukholifulawa, Plutella algebra, Spodoptera exigua, budworm njll
Isicelo: Ingasetshenziselwa kanye nezinye zinambuzane; kuba akukho Kunobungozi Izinyosi futhi ephephile ntu nemfuyo. Kubaluleke ephephile izitshalo. Umthelela ukulawula ingahlala 15-20days futhi kangcono ukusebenza isicelo e-Green House
Isikali: 1350gram-2250gram EW / ehektheleni, 675-900kgs Amanzi / ehektheleni, Operation phambi 9am noma ngemva 4pm, gwema e High lokushisa sezulu.